Creative Writing » 2015 Review (၂၀၁၅ မှတ်တိုင်ကို စောင်းငဲ့အကြည့်)	28
Posted by padonmar on Jan 4, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
စိတ်ကြည်လင်ဖို့ ဉာဏ်ကောင်းဖို့ တံမြက်လှည်းစို့ ၊အမှိုက်ကောက်စို့၊
ဒုံဒုံတိမ်တိမ်အင်တာဗျူး နဲ့ မဆုံးတဲ့ ပြဇာတ်
ပဒုမ္မာရဲ့ ပုံပမာ မွေးနေ့ မင်္ဂလာဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။
ပဒုမ္မာရဲ့ ပုံပမာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သူတို့ကို သိရင် ပြောပေးကြစေလိုပါတယ်။
.နိုင်ငံကို တကယ်ချစ်ပေမယ့် စွန့်ရစ်ကြပါတော့
ပဒုမ္မာရဲ့ ပုံပမာ Organizer တယောက်ရဲ့ ချိုမြိန်ဒုက္ခ
padonmar says: link တွေက ဘယ်လိုဖြစ်လို့ စာတွေပါ အမြည်း ပါကုန်လဲ မသိဘူး။လုပ်တတ်တော့ပုစ်။ရှာလပတ်ရည်သောက်ကုန်ပြီ။
padonmar says: ရွာထဲ လူတော့ ၀င်သား။ ၁၀မိနစ်လောက်မှာ FB Share2ခု နဲ့ + အစိမ်း တခု ၊ကိုယ်ပျောက်တွေ ဖတ်နေကြတယ်။
ဈာန်​ says: ဥုံ … ဖွ
မြင်​​စေသတည်းးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခါတလေများ တွေးမိတာ။
ကထူးဆန်း says: တစ်ခါတစ်လေ လဲ မတွေးမိပါနဲ့ ဇီဇီ
ဈာန်​ says: မရှိမဖြစ်​ .. ဇီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ဇီရေ
ဈာန်​ says: တခါတခါ ဝင်​ကြည့်​ပါတယ်​
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: ဟမငေး
padonmar says: အမှန်တော့ တတ်လို့ဟုတ်ဘူး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: 2015ခုနှစ်ကတော့ ကျနော်စာမရေးဖြစ်
padonmar says: ကိုပေါက်ရေ
kai says: ဒီနှစ်ထဲတော့.. မြန်မာပြည်အရောက်လာမယ်တွေးတာပဲ…။ မြန်မာ့ဂဇက်ရောပေါ့..။
ဈာန်​ says: အဟမ်းးး
မြန်​မာပြည်​လာရင်​ ​အောင်​​ဇေမင်းကိုသတိယပါ တခြားကားသွားငှားစီးလို့က​တော့ ​ကြော်​ငြာမထည့်​ဘဲ​နေပလိုက်​မယ်​ ဟွင်း ဟွင်း
ဦးကြောင်ကြီး says: https://www.facebook.com/frontiermyanmar.net/?fref=nf
kai says: ကျေးကျေး.. သူတို့အင်တာဗျုးသွားသဗျ..။ အမေရိကားမှာမီဒီယာလုပ်နေတာ ၁၀နှစ်ထဲရောက်နေသမို့.. အံ့သြနေပုံ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကတိတွေ ပေးထားတာလည်း လွန်နေပြီရှင့် အကို။
kai says: ဒီနှစ်ဆန်းမှာ လုပ်ချင်နေတဲ့အလုပ်တခုက….
ကုန်ကျစရိပ်တာဝန်ယူမယ်လေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော့ ကုန်ကျစားရိတ်ပါ တာဝန်ယူမားးး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟွာလေ..
padonmar says: သဂျီး ခေတ်နောက်ကျနေသလားလို့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ဘူး တီဒုံ၊.
padonmar says: ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တဲ့ အတွဲတွေ ကိုယ်ထင်ပြပါဗျို့။
alinsett says: စာကြည့်တိုက်အတွက် စာအုပ်ဆိုင်မှာ သင့်ရာရာ စာအုပ်တွေ လစဉ် ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ အလုပ်… အဲ့အလုပ်လေးကို အားအကျဆုံးပဲ…
padonmar says: သိတယ်။ အန်တီလည်း အကြိုက်ဆုံးပါ။
ဦးကြောင်ကြီး says: အနိမ့်စုန်းလုပ်ခ အုပဒေကို ဆန့်ကျင်လို့ မဟာခိုဘွဲ့ရတာ မီပါဘာလား ခိုနီဒုံ…
Mike says: .နောက်ကျနေတာခွေးလွှတ်ပါအာတီဒုံရေ
.အာတီဒုံရဲ့ ပရဟိတအလှူ တွေနဲ့ ဘာသာရေးအလုပ်တွေကို လေးစားအားကျပါတယ်လို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.